5 အကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းအတွက်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ >5အကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းအတွက်ဥရောပ
သမုဒ္ဒရာ, မြစ်များ, နှင့် ရေကန်များ သာမဟုတ်အလှသဘာဝအံ့ဘွယ်သော တန်ဖိုးရှိစီမံကိန္း အားလပ်ရက်ပတ်ပတ်လည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်5အကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းအတွက်ဥရောပ ကြောင်းထက်ပို။ တန်ဖိုးရှိတစ်ခရီးစဉ် အကူအညီဖြင့်ကယ်ရထားရထားလက္မွတ္မ်ား.
5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပူစမ်း 1: ကြင်ပဲရစ် Bains လှည့်ဖျားကြသည်။, ပြင်သစ်
ကြင်ပဲရစ် Bains, Riviera ၏ Alps ၏အပူမြို့တော်, အဆိုပါမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားဆန်းပြားနှင့်ကျယ်ပြန့်ရေကန် Bourget အပေါ် berthed. ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ်5အကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းအတွက်ဥရောပ နှင့်နေသည် found deep in the Savoie french area, ယင်း၏အဲလ်ပ်တောင်တန်း massif ရပ်ကွက်အတွင်းအဘို့အကျော်ကြား. စင်ကြယ်သောရေ၏ရှေ့မှောက်တွင်, များစွာသောသတ္တုသီလနှင့်အတူ, တမြို့လုံးလှည့်ပတ်, ဒီအပူအစဉ်အလာမှသဘာဝကဦးဆောင်လမ်းပြ. ဤသည်မှော်အရပျကယ့်ကိုသငျသညျပေးသည် အကောင်းဆုံးသဘာဝအဘို့သင်သည်သင်၏ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း. ေကြင်ပဲရစ် Bains လှည့်ဖျားထို Alpes, သဘာဝဆေးဝါးနှင့်ဆိုပါကကြွယ်ဝရေပေါင်းစပ်ကိုဆက်ကပ်ရန်အမှန်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး.
ဗာကြင်ပဲရစ် Bains သား Revard ရထား
ပြင်သစ်အကြင်ပဲရစ် Bains သား Revard ရထား
ပဲရစ်အကြင်ပဲရစ် Bains သား Revard ရထား
ဘန်းဖို့ကြင်ပဲရစ် Bains သား Revard ရထား
2: Terms di Saturnia - Tuscany, အီတလီ
လွယ်ကူသောရဖို့ရှိနေရန်ကိုယ့်အကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအတွက်ဥရောပနှင့်အတူအကူအညီအကယ်ရထား, Tuscany ကြွားဆုံးမြေ့ပူစမ်းတွင်ကမ္ဘာ. ဒါကြောင့်, အဘယ်သူမျှမအံ့ဘွယ်သောအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်း5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပူစမ်း! နှင့် 500 ကုထုံးရေလီတာတစ်ဦးမီးတောင်မီးတောင်ထဲကတိုင်းစက္ကန့် pumped ခံရ, ဒီနွေဦးရေလုံးဝစင်ကြယ်. ယင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည် 99.5 ဂ]ရေနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အီတလီကပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်း, သံသယရှိစရာမရှိပါတယ်သင်မည်သို့ချော်နက်ပြည်နယ်အပန်းဖြေဒီနွေဦးရာ.
ဤသည်အပူ spa ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမတန်းတူဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိသည်ဖို့မလုပ်ပဲ. ကြွားရကြောင်းကို သဘာဝကျကျအစွမ်းထက်, စင်ကြယ်ဓာတ်သတ္တုဆားကြွယ်ဝ. လက်ဆောင်တစ်ခု၏သဘောသဘာဝအရာအပြည့်အစမ်းရေကန်အဖြစ်စီးဆင်းမှအနွေဦးချိန်းတွေ့ခဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏နောက်ကျော. Why not try it out for yourself?
5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပူစမ်း 3: aqua ခုံး - Tyrol, သြစတြီးယား
16 ရာစုကတည်းက, ကလူက၎င်း၏ရေပူစမ်း၏ငြိမ်းစေလျက်ဂုဏ်သတ္တိများကနေအကျိုးခံစားရဖို့ Tyrol သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြ. ယခုတွင်သင်သည်နှင့်ပြည့်စုံအကြီးအကျယ်ဗတ်နှင့်အပူရေကန်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ် 90 ဂရန်] 97 ဂ]ပူပူနွေးရေ. အဘယ်အရာကိုဒီနွေဦးထူးခြားတဲ့စေသည်ယင်း၏ levitating အပူရေအင်တုံဖြစ်ပါသည်, အလင်းအိမ်နှငျ့ပွညျ့စုံ, နှိပ်နယ်ခုံ, နှင့်ဆြယ္လို.
အဖမ်းမျက်စိ၏ဗိသုကာ အရင်းအမြစ် spa ခန်းမပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သဘာဝတရား၏ဂုဏ်အသရေကိုထင်ဟပ်. သစ်သား, ကြောကျ, အလင်းနှင့် – ဒါပေါ့ – ရေ၏အစိတ်အပိုင်းကိုစိတ်ကူးရှုခင်း. စုစုပေါင်း 12 မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပရေကန်ရေကူးခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဝေးလွင့်မျောနေသောပါစေရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်. အတွင်းရေကန်များမှာချိတ်ဆက်အသုံး ကဗျာဆောက်အဦးအပြင် ရေကန်အပေါ်မှာ stilts မှတဆင့်တုိက္ႏ.
4: Thermae ဗာ Spa - ဗာ, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
လျှော့ပေါ့ဖြစ်ကြောင်းဥရောပမှာတော့ပူ Springs နှင့် သမိုင်းဝင်? အသံလိုပဲအကောင်းတစ်လမ်းမှအရှိန်အချို့ ပုံးစာရင်း ပစ္စည်းများကိုတစ်ခုအတွက်သွား. ဗာမြို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ, သင်တွေ့လိမ့်မည်အ Thermae သိမ္းစမ်း. တစ်ခုဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရသဘာဝစမ်းနိုင်မည့်ယခုရေချိုးဗြိတိန်မှာသာသဘာဝပူနွေးသော, ဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝသောရေ. အဆိုပါ Celts နှင့်ရောမကျော်လုပ်ခဲ့တယ်သကဲ့သို့ 2,000 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. ဒါဟာ, သို့သော်, ဆက်လက်ခံရဖို့မူလစာမျက်နှာဗြိတိန်သို့တစ်ခုတည်းသောသဘာဝရေပူ. အဆုံးစွန်အပန်းဖြေအတွေ့အကြုံကိုရယူလိုပါသည်. ဒီဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရနေ့ဆံဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝသောရေနွေးမှာ 92 ဂ]နှင့်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းစမ်းကုသမှု.
5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပူစမ်း 5: Gellert ရေချိုးခန်း, ဟန်ဂေရီ
ကျနော်တို့ကယ်တင်ပြီကိုအကောင်းဆုံးအဘို့နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များ. သငျသညျမူပိုင်တူခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, ပင်မယ့်နာရီအနည်းငယ်များအတွက်, သငျသညျကျိန်းသေသွားရောက်ကြည့်ရှု Gellert ဗတ်အတွက်ဟန်ဂေ မြို့တော်, ဘူဒါပက်. ၎င်း embellished ဖွဲ့စည်းပုံမှာသင်တွေ့လိမ့်မည်အကြီးပူနွေးဗတ်လိုင်းများနှင့်အတူရောမတိုင်. ဤရေများတွင်ကုသမှုအတွက်အကျိုးရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည် အဆစ် နှင့်အခြားအရိုးအထူးကုပြproblemsနာများ. Gellert ဗာဖွင့်လှစ် 1918 တူညီသောနက်ရှိုင်းသောမြေအောက်သုံးပြီးဆေးဖက်ဝင်ရေကုသရာပူဇော်သက္ကာကို 12 ရာစုများတွင်အသုံးပြု St ယောဟနျ၏ Knights ပေါက်, နောက်ပိုင်းတွင်တူရကီအပေါ်ဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝသောရေ invigorating အင်အားကြီးခံစားရရန်.
ယင်း၏အများဆုံးထူးခြားတဲ့မှာအပန်းဖြေတွေ့ကြုံခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? ထိုအခါမှကိုကျော်ပေါ်ဦး တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးမဆိုတဦးတည်းမှရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်5ဥရောပအကောင်းဆုံးရေပူစမ်း.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းအတွက်ဥရောပ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hot-springs-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အ/ကအ/ျပီးကြန္ပ်ဴတာမွညိွေ/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.